Iindaba -Ukuphucula njani ukuchaneka komatshini wokubumba ozenzekelayo?
Indlela ukuphucula ukuchaneka kumatshini yokubumba oluzenzekelayo?
Ukwenzela ukuphucula ukuchaneka komatshini wokubumba ozenzekelayo, imiphetho encinci yasentwasahlobo yomgca wokuzahlula ilawulwa kwaye icutshungulwe kakuhle. Umatshini wokubumba usebenza kakuhle nangokuthembekileyo, kwaye inkqubo ye-hydraulic iqhuba ukusebenza ngokukhuselekileyo. Izixhobo zixhotyiswe ngesigunyaziso, esinciphisa umgangatho ophezulu kunye nolawulo lwemveliso ngokukuko kweshishini kunye nomsebenzi ofunekayo. Ke ngoko, uyilo lwesikhunta lubaluleke kakhulu.
Umatshini wokubumba uneendlela ezininzi. Ngokusebenzisa indlela ye-extrusion, isanti efumanekayo kulula ukubangela ukuphuma kokuhamba ngexesha lokuvelisa okunzima. Obu buchwephesha bobuchwephesha bobabini kulula ukusebenzisa, kodwa ayisiyondlela elungileyo yokwenza ubumba ngokwakho. Kwindlela ebandayo yokuyila ibhokisi, ubungakanani bokubumba kunokulungiswa ukunciphisa iindleko zokubumba kwesanti kunye nezibopheleli. Ixabiso le-catalyst catalyst liphezulu kakhulu. Ukunyuka komlinganiso wobushushu besanti eluhlaza, kokukhona kusebenza kwitekhnoloji yokubumba ibhokisi ebandayo.
Indlela yangoku esemgangathweni kukusebenzisa iindlela zokubumba ibhokisi ebandayo yokuphosa iimilo ezinobunzima kunye nobukhulu. Ukongeza, xa kuthelekiswa nezinto zokubumba zesanti ekubunjweni kwe-multi-alloy Co, Ltd. Ingabonakala kwintsebenzo eyintloko yokwenza ukuba ngenxa ye-resin chemistry kunye noomatshini bokubhonkxa abangena ebhokisini, umgangatho ophezulu wokuveliswa unokuveliswa ngexabiso eliphantsi, eliqhubeka liphucula umgca wemveliso ephezulu yeempompo kunye neerobhothi, kwaye kunciphisa inani ukukhutshwa kuveliswe ngexabiso eliphantsi. Umsebenzi ofunekayo. Umatshini wokubumba ingqokelela yebhokisi engundoqo yokwenza iteknoloji luphuhliso olukhulu lwezoqoqosho.
Ibhokisi yesanti, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Umatshini wokukroba ngaphandle, Ukubumba Ivoti Flask, Flask zomngundo Machine, Esingxobeni Ukubumbela,